နေ့စဉ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာရအောင် (အပိုင်း ၂၁) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on January 19, 2015 at 11:53 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီနေ့ အပိုင်း (၂၁) မှာ ရာသီဥတု အကြောင်းပြောရာတွင် သုံးသော အသုံးအနှုန်းများကို ဖတ်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Karen: Brrrr! I'm cold. I thought it was supposed to get warmer today.
Ed: Yeah, I thought so, too. That's what the weatherman said.
Karen: It must be the wind that makes it so cold. I'm freezing!
Ed: Me, too. Let's go inside.
Karen: O.k. It's no fun standing out here, even if the sun is shining.
ပြောသူက အရမ်းချမ်း နေကြောင်းပြသတဲ့ အနေနဲ့ မြည်သံ Brrrr! အသံထွက်က/ r / အသံ ကိုလိပ်ပြီး တုံခါ၍ ထွက်ရတယ်။
ဒီမှာသုံးတဲ့ supposed to က ဘာ sense of obligation မှမရှိပါဘူး။ ဟိုအရင် အပိုင်း ၅ မှာတုန်းက ဖော်ပြခဲ့တဲ့ supposed to နဲ့သဘောထား နည်းနည်း ကွာပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လို့ရအောင် ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
(Supposed to ဆိုတာက expected to တို့ oblidged to တို့ စတဲ့ မလုပ်မနေရ လုပ်ရန်ဆိုတဲ့ စကားစုနဲ့ အဓိပ္ပါယ် တူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ required to (လုံးဝ လုပ်ကို လုပ်ရမယ်) လောက် မတင်းကြပ်ပါဘူး။ Suppose to မှာ suppose ကို passive voice နဲ့ပဲသုံးပါတယ်။ အောက်ပါ ဥပမာ တစ်ချို့ကို ကြည့်ပါ။)
I am supposed to prepareaprogramme for our English club next week. (ကျွန်မ နောက်အပတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကလပ်အတွက် အစီအစဉ်တစ်ခုဆွဲရပါမယ်။)
They were supposed to be here an hour ago- I don't know where they can be. (သူတို့ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နာရီထဲက ဒီကိုရောက်သင့်နေပြီ။ သူတို့ ဘယ်ရောက်နေပြီလဲမသိဘူး။)
We are supposed to practice the dialogues at home, too. (စကားပြော အချီအချတွေကို ကျွန်တော်တို့ အိမ်မှာလဲ လေ့ကျင့်ရမှာပါ။)
Children are supposed to obey their parents. (ကလေးများသည် မိဘများ၏ စကားကို နားထောင်ရမည်။)
To get warmer = to become warmer
Casual conversation စကားပြောမှာ get warmer လို့ပဲပြောရတယ်။ become warmer လို့ပြောရင် အင်္ဂလိပ်နားထဲမှာ သ်ိပ်သဘာဝမကျဘူးပေါ့။
That's what the weather-man said.
(အသုံးများတဲ့ ဝါကျတည်ဆောက်ပုံဖြစ်ပါတယ်။) "မိုးလေဝသ ကြေငြာသူကတော့ ဒီလိုပြောတာဘဲ"
မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သဘောထား မပါဘဲ အခြားသူတစ်ယောက်ယောက်ပြောတာကို ကိုးကားပြောတာ ဆိုရင် ဒီက expression အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဥပမာ တစ်ချို့ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
That's what the teacher told us. (ဆရာမကကပြောတာဘဲ)
That's what Mr. Johnson said. (Mr Johnson ကပြောတာဘဲ)
That's what my father always says. (အဖေကတော့ အမြဲကပြောတာဘဲ)
That's what the students say. (ကျောင်းသားတွေက ဒီလိုပြောတာဘဲ)
Weatherman. (compound noun)
Compound noun ဖြစ်လို့ primary stress ကို first syllable ဖြစ်တဲ့ Weather မှာထည့်ရတာ ဖြစ်ပေမဲ့ third syllable ဖြစ်တဲ့ man အပေါ်မှာလည်း tertiary stress ထည့်ပြီး ပြောရတယ်။ man ရဲ့အသံ ကိုကြားအောင်ထွက်ရတယ်။ အလားတူ man ရဲ့အသံကို ထွက်ဖတ်ပေးရတဲ့ စကားလုံးတွေကတော့ mailman, milkman, superman, snowman တို့ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချို့ suffix -man တွေမှာတော့ man အရှေ့က စာလုံး ရဲ့ obscuring of the vowel sound အသံကြောင့် man အပေါ်မှာ stress မထည့်ရဘူး။ အဲဒီ စာလုံးတစ်ချို့ကတော့ fireman, gentleman, postman, salesman, Englishman တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ postman နဲ့ mailman တို့ ဟာ အဓိပ္ပါယ် တူသော်လည်း stress pattern မတူဘူးနော်။
It must be the wind... (လေတိုက်လို့ ဖြစ်ရမယ်…)
Permalink Reply by May on January 19, 2015 at 13:34
Permalink Reply by Aung Win Naing on January 19, 2015 at 16:14
Permalink Reply by U Paul San on January 19, 2015 at 18:27
Permalink Reply by soethandar on January 23, 2015 at 20:52
Permalink Reply by zinmarmyowin on January 28, 2015 at 13:58